तपाईंको फोटो सम्पादन गर्न १tions फोटोशप कार्यहरू क्रिएटिव अनलाइन
मेलिसा पेरोटा | | ग्राफिक डिजाइन, Photoshop, पुनरावृत्त
यदि तपाइँ तपाइँको कार्य समय अधिकतम गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने, अपेक्षित अन्तिम परिणाममा पुग्न उही चरणहरू दोहोर्याउन समय बर्बाद नगर्नुहोस्। राम्रो प्रयोग फोटोशप कार्यहरू विशिष्ट जुन तपाइँको फोटोग्राफहरू तपाइँले खोजिरहनुभएको शैली प्रदान गर्न मद्दत गर्दछ।
एडोबको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सम्पादन कार्यक्रम, "फोटोशप" सँग धेरै शक्तिशाली प्रोग्रामिंग भाषा रहेको छ। यो एक तपाइँलाई अनुमति दिन्छ कार्यहरू मार्फत चरणहरू रेकर्ड गर्नुहोस् तब तिनीहरूलाई स्वचालित रूपमा दोहोर्याउनुहोस् केहि तत्वमा तपाइँले चयन गर्नुभयो। त्यसो भए, तपाई केवल तपाईका आफ्नै कार्यहरू रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्न, तर तपाईले अन्यले सिर्जना गरेको आयात गर्न सक्नुहुन्छ।
यी कार्यहरू प्रयोग गर्नका लागि, तपाईंले प्रस्ताव गरिएको ढाँचामा मात्र आफ्नो मनपर्ने कार्य डाउनलोड गर्नुपर्नेछ र त्यसपछि फोटोशपबाट यसलाई सक्रिय गर्नुहोस्.
2 HDR कार्य
3 सुनौलो घण्टा
5 कालो र सेतो
6 निलो फिल्टर
8 हावामा धुलो
9 कडा HDR
10 रात हुन
13 क्रस प्रोसेसिंग कार्य
14 रंग हाइलाइटर्स
15 पाप वातावरण
यो पृष्ठ को एक प्याकेज प्रदान गर्दछ Du० डुओटोन ढाँचा ताकि तपाईं आफ्नो फोटोहरूमा जीवन्त र add्ग थप्न सक्नुहुन्छ।
यो HDR कार्य अनुमति दिन्छ गहनता छनौट गर्नुहोस् तपाइँ र theहरूसँग कन्ट्रास्ट गर्न चाहनुहुन्छ।
यस सूर्यास्त फिल्टरका लागि लाइटरूम यसले तपाईंको फोटोहरूलाई त्यो र that्ग प्रदान गर्दछ जुन तपाईं घाममा तल झर्दा मात्र देख्नुहुन्छ।
जब तपाईं यसको लागि हेर्नुहुन्छ गर्मी टोन तपाइँको पेस्टल रंगहरू प्रदान गर्दछन उत्तम विकल्प यो कार्यहरूको सेट हो।
प्रत्येक डिजाइनर र फोटोग्राफर को लागी एक धेरै आवश्यक कार्य। को त्यो पूर्वसेटको साथ कालो र सेतो फोटोग्राफी तपाईं आफ्नो मोनोक्रोम छविहरू धेरै छिटो काम गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
तपाइँको फोटोहरू लाई छुने एक विशेष फिल्टर तीव्र सिनेमाई.
यस कार्यको साथ तपाईं आफ्नो फोटोग्राफहरूको टच दिन सक्नुहुन्छ चम्कने र तातो। यो पोर्ट्रेट प्रकारका फोटोग्राफहरूको लागि उपयुक्त छ र यदि यो बाहिरी वातावरणमा राम्रो छ भने।
यो आदर्श कार्य हो यदि तपाईं एक पुनः सिर्जना गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ पुरानो शैली धुतिएको र .्गहरू। यो हावामा धुलोको छाप सिर्जना गर्नका लागि उत्तम छ।
यदि तपाईं आफ्नो छविमा तीव्रता दिन चाहनुहुन्छ भने र highlight हाइलाइट गर्दै र किनारा परिभाषित गर्दै तपाईं यस HDR कार्यलाई शटरपल्सेबाट प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
धेरै स्टक प्याकेज
यो फोटोशप कार्यको साथ तपाईं थप्न सक्नुहुन्छaधुन्ध प्रभाव तपाईंको छविहरूमा।
यो प्याकेज हो जुन धेरै समावेश गर्दछ रंग कार्यहरू र प्रकाश लीक कस्टम निर्मित।
क्रस प्रोसेसिंग कार्य
प्रोसेसिंग एक प्रभाव हो जुन सेवा गर्दछ कन्ट्रास्ट रंगहरू धेरै चाखलाग्दो मिश्रणहरू प्राप्त गर्दै।
रंगहरू हाइलाइट गर्नुहोस् तपाईंको फोटोहरूको शटर पल्स क्रियाहरूको यो नि: शुल्क संस्करणको साथ।
यदि तपाइँ तपाइँको छवि एक भुत स्पर्श दिन चाहनुहुन्छ भने, यो कार्य यसको लागी उत्तम छ। यो डिजाइन गरिएको हो कि तपाईं आफ्नो फोटोग्राफहरू एक दिन सक्नुहुन्छ अँध्यारो शैली, केही डरलाग्दो.
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » ग्राफिक डिजाइन » १ Photos फोटोशप कार्यहरू तपाईंको फोटोहरू सम्पादन गर्न